လူသား၏ယောဂ - Afrikhepri Fondation
ယောဂသည်ထာဝရဥပဒေကိုထိန်းသိမ်းသူဖြစ်သည်။ ယောဂသည်အသိပညာ၏ဂိုးသမားဖြစ်သည်။ (ယောဂအန်ကာ)
ယောဂ၏အဓိပ္ပာယ် ပေါင်းစည်းခြင်းဟုအဓိပ္ပါယ်ရသော Sanskrit သင်္ကေတဖြစ်သော“ yuj” မှဆင်းသက်လာသည်။ ယောဂဟူသောစကားလုံးသည်ရှေးအိန္ဒိယလူမျိုးများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဇီဝကမ္မဗေဒဆိုင်ရာနည်းစနစ်အားလုံးကိုစောစောစီးစီးပေးခဲ့သည်။ တူညီသောဝေါဟာရကိုရောက်ရှိရန်ရည်မှန်းချက်နှင့်၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်ရည်ရွယ်သူအားရရှိနိုင်သည့်နည်းလမ်းများကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည်။ "link" ၏အဓိပ္ပာယ်အရယောဂဟူသောဝေါဟာရသည်ဘာသာတရား (ဆက်သွယ်ထားသော) နှင့်အဓိပ္ပါယ်တူသည်။ ၎င်းသည်တစ် ဦး ချင်းမိမိကိုယ်ကို၏စကြဝuniversalာဆိုင်ရာမိမိကိုယ်ကိုပေါင်းစည်းခြင်းဖြစ်သည်။
ယောဂ၏မူလအစ ဖြေ - ယောဂရဲ့ဇာစ်မြစ်ကိုအချိန်ကုန်တဲ့နေရာမှာပျောက်သွားတယ်။ ၎င်း၏သမိုင်းလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကဲ့သို့ဟောင်းနွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်လူသားတို့၏ကြောက်ရွံ့မှုများ၊ သံသယများ၊ မေးခွန်းများနှင့်သူ၏သဘောပေါက်နားလည်မှုပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ယောဂသည်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု၏ကြီးမားသောမေးခွန်းများဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ငါဘယ်သူလဲ။ ဝိညာဏ်ဟူသည်အဘယ်နည်း။ ဘဝဆိုတာဘာလဲ ဤမေးခွန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌နက်ရှိုင်းစွာရေးသားထားသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဥရောပသားတွေ၊ အာဖရိကန်တွေ၊ အာရှသားတွေ၊ အမေရိကန်တွေ၊ သမုဒ္ဒရာသားတွေလားငါတို့အားလုံးဟာဘုံမူလနဲ့ဘုံကံကြမ္မာနဲ့လူသားတွေဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်စကြဝuniverseာကိုဖွဲ့စည်းထားသောသန်းပေါင်းများစွာသောဂလက်ဆီများအနက်နဂါးငွေ့တန်းရှိမရေမတွက်နိုင်သောကြယ်တစ်လုံးပတ်လည်တွင်တစ်နေရာရာကိုလှည့်ပတ်နေသောအပြာရောင်ဂြိုဟ်ပေါ်တွင်နေထိုင်ကြသည်။
ယောဂ၏ခေါ်ဆိုမှု ဖြေယောဂသည်ကမ္ဘာ့ဘာသာတရားအားလုံးကိုလေးစားသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၎င်းတို့အားလုံးထက် ကျော်လွန်၍ အလုံးစုံတို့ကိုသရဖူဆောင်းစေနိုင်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ယုံကြည်မှုအဆင့်တွင်အဓိကမဟုတ်ဘဲအတွေ့အကြုံအဆင့်တွင်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏နယ်ပယ်သည် ၀ ိညာဉ်ရေးသက်သက်သာဖြစ်ပြီး၊ သူ၏သင်ကြားမှုသည်တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းဖြင့်ဘုရားခေါ်တော်မူခြင်းကိုခံစားရမည့်သူများအားသာလျှင်ဘုရားသခင်ခေါ်တော်မူခြင်းဖြစ်သည်။
တစ် ဦး ကစာသားမက်ဆေ့ခ်ျကို ယောဂသည်အိန္ဒိယ၏ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သောသက္ကတကျမ်းစာပေများဖြင့်ပြဌာန်းထားသော်လည်း၎င်းသည်လူသားထုအားလုံးနှင့်အမှန်တကယ်သက်ဆိုင်သည်။ ၎င်းသည်နိုင်ငံတစ်ခုတည်း၊ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်ဘာသာတစ်ခုတည်းထက် ပို၍ ကြီးမားသောအစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ကမ္ဘာနှင့်စကြာ ၀ throughoutာတစ်လျှောက်လုံးရှိဖြစ်တည်မှု၏နက်နဲသောအရာများကိုထိုးဖောက်ရန်နှင့်ဘုရားသခင့်ပြည်ထောင်စုကိုရရှိရန်ကြိုးစားသူများအားလုံး၏ဘုံရည်မှန်းချက်နှင့်ပူးပေါင်းသည်။
အိန္ဒိယနှင့်ယောဂ အိန္ဒိယသည်အိပ်မက်များနှင့်အချိန်ကာလနှင့်မဝေးပါကအိန္ဒိယသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိုးလ်၏ရှေးဟောင်း Oriental ဖြစ်သည်။ (André Malraux)
ခရီးသွားရန်ဖိတ်ကြားချက် လူ့အတွေးရဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နဲ့ယောဂကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတာကိုအပြည့်အဝနားလည်ဖို့ဆိုရင်အခုဆိုရင်ငါတို့ဟာအာကာသနဲ့အချိန်ခရီးရှည်ကိုသွားကြတော့မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာကိုပိုမိုနားလည်စေရန်အိန္ဒိယသို့သွားမည်။
အိန္ဒိယ၏ပုခက် ပထဝီအနေအထားအရအိန္ဒိယသည်မြောက်ဘက်တွင်ဟိမဝန္တာတောင်တန်း၊ အရှေ့ဘက်တွင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၊ တောင်ဘက်တွင်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနှင့်အနောက်ဘက်တွင်အာရေဗျပင်လယ်တို့ဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည်။ ယခင်ကပါကစ္စတန်နှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသည်ဤကျယ်ပြန့်သောနယ်မြေ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အိန္ဒိယကိုလူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်ဘာသာတရားများ၏mရာမကျောက်တုံးကြီးအဖြစ်ရှုမြင်ရမည်။ အခြားကမ္ဘာ့အခြားဒေသများနှင့်မတူဘဲအိန္ဒိယသည်၎င်း၏ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့သည် (သို့သော်မည်မျှကြာအောင်)? ၎င်းသည်ဘာသာတရားများ၊ ယုံကြည်မှုများအားလုံးနှင့်အယူသီးမှုအားလုံးအတူတကွစုစည်းနေထိုင်သောလူသားမျိုးနွယ်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏တကယ့်သက်ရှိရုပ်ပုံဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယသမိုင်း အိန္ဒိယသည်ပထဝီအနေအထားအမျိုးမျိုး၊ အချိန်ကာလအမျိုးမျိုးနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ရပ်များကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ဤသို့သောနိုင်ငံ၏ကြွယ်ဝမှုနှင့်အရေးပါမှုကိုအပြည့်အဝရှင်းပြရန်အတွက်စာအုပ်များစွာလိုအပ်လိမ့်မည်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့သမိုင်းအကျဉ်းချုပ်မှာတော့ Alain Daniélouရဲ့လက်ရာတွေကိုအဓိကရည်ညွှန်းသွားမှာပါ။
သမိုင်းမတိုင်မီ PALAEOLITHIC သမိုင်းမတိုင်မီနှစ်ပေါင်း ၃.၅ သန်းကစတင်ခဲ့ပြီးစာရေးခြင်းတီထွင်မှုဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဤရှေးခေတ်ကာလနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အနည်းငယ်သာပြောနိုင်သည်။ Australopithecus သည်အာဖရိကတွင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ မျောက်နှင့်အလွန်နီးကပ်နေသော်လည်းမကြာမီတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်သည့်အမျိုးအစား၏ပထမဆုံးကိုယ်စားပြု homo habilis ကိုလမ်းဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ Homo habilis သည်သူ၏လက်များသောလက်များဖြင့်သူ၏ကိုယ်ပိုင်ကိရိယာများကိုဖြတ်ရန်နှင့်အမိုးအကာများဆောက်ရန်သင်ယူသည်။ အသိုင်းအဝိုင်းဘဝသည်ပီသသောဘာသာစကား (အခြေခံပုံစံ) အပါအ ၀ င်ဆွေးနွေးမှုများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂ သန်းခန့်က Homo erectus သည်၎င်း၏ဘိုးဘေးထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအရွယ်အစားနှင့် ပိုမို၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောဥာဏ်ရည်ထက်သာလွန်ခဲ့သည်။ ပို၍ ပေါများသောအစားအစာများကိုရှာဖွေရန်မြောက်ဘက်သို့တဖြည်းဖြည်းရွှေ့ပြောင်းလာသည်။ ဘီစီ ၈၀၀,၀၀၀ နှင့် ၅၀၀,၀၀၀ ကြားတွင်မီးကျွမ်းခြင်းကလူ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွင်အရေးပါသောအဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့နောက် hominid မိသားစုတွင် Neanderthals အပါအဝင်မျိုးစိတ်များစွာပါဝင်သည်။ သူသည်ဥရောပနှင့်အရှေ့မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတွင်နေထိုင်သည်၊ နည်းစနစ်အသစ်များကိုတီထွင်ကာသူ၏အလောင်းကိုသင်္ဂြိုဟ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၅၀,၀၀၀ ခန့်က Cro-Magnon လူသား (homo sapiens = ပညာရှိ) ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝေးလံသောဆွေမျိုး၏မျက်မှောက်တွင်ရှိနေသည်။ သူကပြောတယ်၊ ငါတို့ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဆင်တူတယ်၊ ခြေသလုံးအိမ်မှာနေတယ်၊ ​​ပြီးတော့ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကိုကိုလိုနီခေတ်လုံးလုံးမယူရဘူး။
ရန်လို ဖြေ - Paleolithic လူတွေအတွက်ဖန်ဆင်းခြင်းတစ်ခုလုံးဟာအလွန်ကြီးစွာသောနက်နဲသောအရာဖြစ်ပေသည်။ သဘာဝစွမ်းအားများအားလုံးကိုပျော့ပြောင်းနိုင်သည့်“ အင်အားကြီးနိုင်ငံများ” အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး Animism သည်လူသားအားလုံးအတွက်ဘုံဘာသာတရားဖြစ်လာသည်။ ဘိုးဘေးကိုးကွယ်မှု၊ နာမ်ဝိညာဉ်လောက၊ မှော်နှင့်စုန်းအတတ်၊ အသေးနှင့်ကြီးမားသောအယူသီးမှုများသည်ဤဝေးလံသောအတိတ်မှဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ဝေးလံခေါင်သီသောဒေသများ၊ ရှေးဟောင်းလူမျိုးတို့၏မျိုးဆက်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရဆဲဖြစ်သည်။ ဤပရိုတို - သြစတြေးလွိုက်များကိုအက်ဒီဗာစီ (ပထမဆုံးနေထိုင်သူများ) ဟုခေါ်သည်။ သူတို့သည်ပြင်ပကမ္ဘာနှင့်အနည်းငယ်သာဆက်သွယ်မှုရှိကြသည်၊ သူတို့၏ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်ဓလေ့ထုံးစံများကိုမနာလိုစောင့်ရှောက်ပြီး Munda သို့မဟုတ်မေခမာဘာသာစကားကိုပြောဆိုကြသည်။
ရောက်ရှိခြင်း Neolithic တွင်ဒရိုင်ဘာ - ဘီစီ ၁၂၀၀၀ ဝန်းကျင်ရှိရေခဲပြင်ခေတ်ကုန်ဆုံးချိန်တွင်ကမ္ဘာ၏အထွေထွေရာသီဥတုမှာအလွန်ပင်ပူနွေးလာပြီးလူနေမှုအဆင့်အတန်းသည်လည်းလူသားအားလုံးအတွက်သက်ညှာမှုပိုများလာသည်။ ရှေးခေတ်ခြေသလုံးလူမျိုးစုတွေတဖြည်းဖြည်းအခြေချလာတယ်။ သူတို့သည်စိုက်ပျိုးရန်၊ တိရိစ္ဆာန်များမွေးမြူရန်၊ အမျိုးမျိုးသောအရာများပြုလုပ်ရန်နှင့်ခိုင်ခံ့သောကျေးရွာများတွင်နေထိုင်ရန်သင်ယူခဲ့ကြသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် Dravidians အညိုရောင်အသားအရေနှင့်ချောမွေ့သောဆံပင်များရှိသည့်လူသစ်များပေါ်ထွန်းလာသည်။ သူတို့၏မူလအစသည်ထင်ရှားမှုမရှိ။ သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဒဏ္legာရီအရသူတို့သည်ရေခဲမြစ်အရည်ပျော်ပြီးနောက်ရေလွှမ်းနေသောတိုက်ကြီးမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
Indus ၏ယဉ်ကျေးမှု ဖြေ - ငါတို့ခေတ်မတိုင်ခင်နှစ်ပေါင်းလေးထောင်တုန်းက Dravidians တွေဟာအိန္ဒိယရဲ့အစိတ်အပိုင်းအတော်များများကိုသိမ်းပိုက်ပြီးပြီ။ သူတို့ကသန့်စင်ပြီးယဉ်ကျေးသောယဉ်ကျေးမှု (Indus civilization) ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ Mohenjo-Dora နှင့် Harappa မြို့များသည်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ခဲ့သည်။ ဤမြို့နှစ်မြို့ (ယနေ့ခေတ်ပါကစ္စတန်) သည်အရေးကြီးသောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကိုချန်ထားခဲ့ပြီးထိုအချိန်ကရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်များအားထိုအချိန်ကဘဝနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျသောအတွေးအခေါ်ကိုရရှိစေခဲ့သည်။ ဖယ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်း၏ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ Dravidian ယဉ်ကျေးမှုသည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်မြေထဲပင်လယ်ကမ္ဘာနှင့်အပြန်အလှန်လဲလှယ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ရှေးဟောင်း SHIVAISM ဖြေ - Dravidians တွေရဲ့အဓိကဘာသာတရားကတော့ Shaivism ပဲ။ သဘာဝတရားနှင့်နီးကပ်သောဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်ပြီးရှေးဟောင်း Shaivism သည်နက်နဲသောစွမ်းအင်များအားဘုရားသခင့်ရှေ့တော်သို့ခုန်ချရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။ ၎င်းတွင်မှော်အတတ်၊ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခြင်းနှင့်ရယူခြင်းစွမ်းရည်များပါ ၀ င်သည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်သူများသည်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်အသက်ရှုထိန်းချုပ်ခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းများကိုလေ့ကျင့်သည်။ သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကမ္ဘာကိုစူးစမ်းလေ့လာပြီးသိပ္ပံပညာကိုညွန်ပြနိုင်သည်။
ရှေးခေတ်ဂျင်းနစ် အိန္ဒိယတွင်တချိန်တည်းတွင်ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားလာသည့်ရှေးခေတ်ဘာသာတရားကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်ဘုရားမဲ့ဝါဒီဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲဂျိန်းဝါဒသည် Shaivism နှင့်မတူဘဲ၊ ၎င်း၏ dualistic အတွေးအခေါ် (ဝိညာဏ - ကိစ္စ) ၏ကူးပြောင်းခြင်း၏သီအိုရီ, Karma နှင့်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းသံသရာ၏နောက်ဆုံးလွတ်မြောက်ရေး (Nirvana) ထောက်ခံသည်။ ဤအတွေးအခေါ်၏နောက်ခံသဘာ ၀ အတိုင်းပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆာဟာရနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတွင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။
သမိုင်းဝင်ကာလအတွင်းအာရိယန်ကျူးကျော်မှု ဘီစီဒုတိယထောင်စုနှစ်တစ်လျှောက်တွင်ယူကရိန်းမှခြေသလုံးအိမ်များ၊ ရာသီဥတုအခြေအနေများကြောင့်အိန္ဒိယ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်ဥရောပတို့မှကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ ဂင်္ဂါချိုင့်ဝှမ်းသို့သူတို့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းသည်ရာစုနှစ်များစွာကြာခဲ့သည်။ သူတို့သည် Indus မြို့များကို ဖျက်ဆီး၍ အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းတွင်အခြေချခဲ့သည်။ မြောက်ဘက်မှအဖြူရောင်အရေခွံရှိသောအာရိယန်လူမျိုးများသည်ဒေသခံများကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးတဖြည်းဖြည်းကျွန်ပြုမှုသို့လျှော့ချခဲ့သည်။ ရှုံးနိမ့်ခြင်းမရှိသောဒရဗ်ဒီးယန်းများသည်တောင်ပိုင်းတွင်ထွက်ပြေးခိုလှုံခဲ့ကြပြီးခရစ်ယာန်ခေတ်မတိုင်မီအထိလွတ်လပ်သောပြည်နယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်အာရိယန်များသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသောမျိုးရိုးလိုက်ဇာတ်ကောင်စနစ်တစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးသူတို့၏အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ထောင်စုနှစ်များစွာအတွက်အခွင့်အရေးများကိုအာမခံခဲ့သည်။ အင်ဒီရာဂန္ဒီ (၁၉၁၇ မှ ၁၉၈၄) အစိုးရလက်အောက်တွင်စနစ်ကိုတရားဝင်ဖျက်သိမ်းခဲ့သော်လည်းအိန္ဒိယလူ့အဖွဲ့အစည်းသည်ဤအတွင်းပိုင်းကွဲပြားမှုများကနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းထင်ရှားသည်။ ယနေ့အချိန်တွင်အများအားဖြင့်ရှေးရိုးစွဲဟိန္ဒူဘာသာဝင်များအတွက်အနောက်တိုင်းသားများအားလုံးကိုမသင်္ကာဖွယ်ရာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ။
အာရိယန်၏ဘာသာတရား အာရိယန်လူမျိုးများသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှုများနှင့်ဘာသာတရားများကိုယူဆောင်လာခဲ့သည်။ ဝေဒ (သို့မဟုတ်ဝေဒ၏ဘာသာတရား) သည်ဝေဒ့် (၄) ခု၏အငြင်းပွားဖွယ်ရာအခွင့်အာဏာအပေါ်တွင်သာမှီခိုထားသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောတည်ရှိမှုလေယာဉ်များကိုအုပ်ချုပ်သောအင်ဒီရာ၊ အဂ်နီ၊ ဗာရူနာ၊ ဆိုမာလီနတ်ဘုရားများ (နတ်ဘုရားများ (အင်ဒရာ၊ အဂ်နီ၊ ဗာရူနာ၊ စома)) ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းတွင်ပထမ ဦး ဆုံးပါဝင်သည်။ ဝေဒကိုးကွယ်မှုကိုယဇ်ပူဇော်ခြင်း၊ ကောင်းမြတ်ခြင်း၊ မျက်နှာသာပေးခြင်းသို့မဟုတ်အခွင့်ထူးတစ်ခုရရှိရန်ဘုရားအားပူဇော်သောဓမ္မပူဇော်ခြင်းအယူအဆအားဖြင့်ဖော်ပြသည်။ ဤအခမ်းအနားများကိုယေဘုယျအားဖြင့်ထင်းမီးတစ်ခွင်တွင်ပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး၊ များသောအားဖြင့်ဗြဟ္မများ ဦး ဆောင်သောဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ ဦး ဆောင်သောစည်းဝေးကြီးတစ်ခုကိုအတူတကွစုစည်းခဲ့ကြသည်။ Karma နှင့် transmigration ၏သီအိုရီသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိရှိထားသည့်အတိုင်း Vedas ၏အတွေးအခေါ်နှင့်ဘာသာရေးအမြင်များနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ ဤရှေးခေတ်အာရိယန်လူမျိုးများအတွက်မြေကြီးပေါ်ရှိစံပြဘဝကိုနှစ်ပေါင်းတစ်ရာကြာရှည်တည်မြဲစေပြီးနောက်ဆုံးတွင်သူတို့၏ဘိုးဘေးများ၏ပရဒိသုတွင်သေခြင်းသည်တူညီသောအပျော်အပါးများနှင့်အတူတူပင်အခွင့်ထူးများသာဆက်လက်တည်ရှိသည်။.
THE SANSKRIT ။ ဘီစီ ၃၀၀၀ ခန့်တွင်အိန္ဒိယ၊ ဆမ်မားနှင့်အီဂျစ်တို့တွင်ဤအရေးအသားသည်တစ်ပြိုင်နက်တည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ရှေးဟောင်း Mohenjo-Daro ရေးသားခြင်းကိုမရှင်းလင်းရသေးသောအာရိယန်များကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးနောက်တွင်စာအရေးအသားကိုလျစ်လျူရှုခဲ့သည်။ ဘီစီ ၆ ရာစုမတိုင်မီအထိအိန္ဒိယ၌ဆီးမိုက်ဘာသာမှဆင်းသက်လာပြီးစီးပွားဖြစ်အလုပ်အကိုင်ဖြင့်စာအရေးအသားပုံစံအသစ်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက်အာရိယန်လူမျိုးများသည် Vedic မှဆင်းသက်လာသောအတုဘာသာစကားကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်စုံလင်ခြင်း၊ ဘုရားများမှုတ်သွင်းခြင်းနှင့်ပညာရှင်များအသုံးပြုသော Sanskrit ဘာသာဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်အဆုံးမရှိတဲ့ဝေါဟာရကြွယ်ဝသောဤအရေးအသားကြောင့်အာရိယန်လူမျိုးများသည်သူတို့၏ဘာသာရေးနှင့်အတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာကျမ်းများကိုနှုတ်ဖြင့် ပြန်၍ ပြန်လည်၍ ပြန်လည်ရေးသားပြီးအိန္ဒိယလူ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးအပေါ်စစ်မှန်သောယဉ်ကျေးမှုလွှမ်းမိုးမှုကိုတည်ဆောက်ရန်အာရိလူတို့အားခွင့်ပြုခဲ့သည်။
အလွန်ကြီးစွာသောယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဘာသာရေးစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည် ။ ဤပြောင်းလဲမှုကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အတိအကျမသိပါ။ သို့သော်ဌာနေဒြပ်စင်များနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိခြင်း (သို့) လျင်မြန်သောအတွင်းပိုင်းဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဝေဒဘာသာတရား၏ပုံစံဟောင်းများအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားသည်။ အာရီယန်လူမျိုးများသည်သူတို့၏လူမှုအခွင့်အရေးများကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်အောင်နိုင်ခြင်းလူမျိုးများ၏အနုပညာနှင့်နည်းစနစ်များနှင့် Shaivism နှင့် Jainism တို့၏အတွေးအခေါ်နှင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအယူအဆများကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းလက်ခံလာသည်။ လာမယ့်ထောင်စုနှစ်အတွင်းမှာအိန္ဒိယသမိုင်းဟာမတူညီတဲ့ကာလများစွာကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။
VEDISM မှ BRAHMANISM သို့ : ပထမရာစုအေဒီ ၃ ရာစုအကုန်အထိတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိရှိထားသည့်အတိုင်းဟိန္ဒူ Pantheon (Brahma, Vishnu, Shiva) တည်ထောင်ခြင်းနှင့်လည်းရည်ညွှန်းစာအရေးအသား (Upanishads) ၏တိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။ , Darsanas) ။ ဤကာလသည် ၀ ိညာဉ်ရေးရာအရများစွာအကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီး၊ ဗာဒ့်၏ရိုးရာဓလေ့ဘာသာရေးနှင့်ပြင်ပယောဂအားရှာဖွေခြင်းတို့အကြားရှင်းလင်းပြတ်သားသောခွဲခြားမှုကိုပြသခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓ: အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအိန္ဒိယလူ့အဖွဲ့အစည်းဟာမြုံရိုးရာဓလေ့ထုံးစံတစ်ခုမှာအေးခဲသွားတယ်။ ပိုမို၍ ခေတ်မီဆန်းပြားပြီးစျေးကြီးလာသည်နှင့်အမျှဝေဒအခမ်းအနားများသည်တိုင်းပြည်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပျက်စီးစေခဲ့သည်။ ဤထက်နည်းသောဒီထက်နည်းသောလူမှုရေးအခြေအနေတွင် Siddartha Gautama မွေးဖွားခဲ့ပြီးအာရှတစ်ခုလုံးဖြစ်သောဗုဒ္ဓ (Awakened) ဖြစ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဘီစီ ၅၆၃ တွင်နီပေါနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိမင်းသမီးမိသားစုတွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး Gautama သည်မွေးဖွားစဉ်ကပင်ထူးကဲသောကံကြမ္မာဖြစ်သည်။ အသက် ၃၀ အရွယ်မှာကမ္ဘာကြီးကိုစွန့်ပြီးသူဟာနှစ်ပေါင်းများစွာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ဖက်ဝါဒကိုကျင့်ကြံခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာအသိဥာဏ်အလင်းကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ယင်း၏အယူဝါဒသည်ကံနှင့်သီအိုရီကို အခြေခံ၍ လူ့ဆင်းရဲဒုက္ခများ၏ပြconcreteနာကိုခိုင်မာ။ အစွန်းရောက်သောတုန့်ပြန်မှုအဖြစ်ရည်ရွယ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်သူ၏ "မြင့်မြတ်သောအမှန်တရားလေးပါး" ကိုအရင်ဖော်ထုတ်ခဲ့ဖူးသည်။ ထို့နောက်သူသည်လျင်မြန်စွာတိုးများလာခဲ့သည်။ Vedism (ထင်ရှားသောဘာသာတရား) နှင့် Shaivism (တစ်ယူသန်ဆန်သောဘာသာရေး) ကိုဆန့်ကျင်။ သူသည်ဇာတ်စနစ်၊ ရိုးရာဓလေ့နှင့်အယူသီးမှုနှစ်ခုလုံးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ အစဉ်အလာတစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးဗုဒ္ဓဘာသာသည်စစ်မှန်သောဘာသာတရားထက်အတွေးအခေါ်နှင့်တူသည်ဟုဗုဒ္ဓဘာသာကအိန္ဒိယတွင် ပို၍ သြဇာလွှမ်းမိုးလာသည်။ ဘီစီ ၄ ရာစုမှဘီစီ ၂ ရာစုအထိ၊ မောရေးမင်းဆက်သည်ဝေဒကိုးကွယ်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ဘာသာတရားအသစ်ကိုထပ်မံမျက်နှာသာပေးခဲ့သည်။ သို့သော်ဘီစီ ၂၇၄ တွင်အိန္ဒိယဘုရင်တစ်ပါးလုံးသည်ဘုရင်အာခokaနောက်မှဗုဒ္ဓဘာသာသို့ကူးပြောင်းခဲ့သည်။ ဘုရင်အာခကိုအုပ်စိုးစဉ်ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုနုတ်ပယ်ရေးသားခြင်းနှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းများကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကောင်စီကြီးတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ သာသနာပြုများစွာကိုအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအပြင်ဂရိနှင့်မြေထဲပင်လယ်ဒေသများသို့စေလွှတ်ခဲ့သည်။
ဂျင်းနစ် ဖြေ - တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမဟာဗရီရာ (ဘီစီ ၅၅၉)၊ ဂျိန်ဘာသာ၏ ၂၄ ကြိမ်မြောက်နှင့်နောက်ဆုံးပရောဖက်ပေါ်ထွန်းလာသည်။ ထိုနေရာများတွင်ဂျိန်းဝါဒကိုသူ့အားတည်ထောင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးသောအတိတ်ကမဟာဟီရာသည်ဆန်းသစ်တီထွင်သူတစ် ဦး ထက်စာလျှင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားတစ် ဦး အတွက်ပိုမိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သာသနာပြုများစွာစေလွှတ်ခြင်းခံရသော်လည်းသူ၏သြဇာသည်အိန္ဒိယထက် ကျော်လွန်၍ မလွှမ်းမိုးခဲ့ပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ဤဘာသာတရားနှင့်ဆက်နွှယ်သည့်အကြီးမြတ်ဆုံးတန်ဖိုးများဖြစ်သောအကြမ်းမဖက်ခြင်းနှင့်သက်သတ်လွတ်စားခြင်းဝါဒတို့သည်အိန္ဒိယလူ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်လာသည်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာတောင်ဒီကျယ်ပြန့်တဲ့နယ်မြေတွေမှာရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ဒီရှေးခေတ်ဘာသာတရားဟာရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်သာရှိပေမယ့်ရှေးရှေးတုန်းကသက်သေထူခဲ့ပြီ။
THE GREEKS ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု ဤကာလအတွင်းအိန္ဒိယသည်ဂရိတို့၏လွှမ်းမိုးမှုနှင့်လွှမ်းမိုးမှုကိုခံခဲ့ရသည် (JC မတိုင်မီ ၃-၂ ရာစုနှစ်များ) ။ ရှေးခေတ်ကတည်းကမြေထဲပင်လယ်ကမ္ဘာနှင့်ကုန်သွယ်မှုနှင့်လဲလှယ်မှုများလုံးဝမတည်ရှိတော့ပါ။ သို့သော်မဟာအလက်ဇန္ဒားပေါ်ထွန်းလာခြင်းနှင့်အောင်ပွဲခံလိုသောဆန္ဒတို့ကြောင့်ဂရိများသည်အိန္ဒိယနှင့်အာဖဂန်နစ်စတန်တွင်အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ အထူးသဖြင့်အနုပညာ၊ ပန်းပုနှင့်ဗိသုကာပညာနယ်ပယ်များတွင်ဂရိတို့၏လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်မဟာအလက်ဇန္ဒား (ဘီစီ ၃၂၃) ကွယ်ပျောက်ပြီးနောက်မကြာမီတွင်အိန္ဒိယသည်ဂရိတို့၏ချုပ်ကိုင်မှုမှလွတ်မြောက်ပြီးလွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည်။
BRAHMANIC သက်တမ်းတိုး ။ အေဒီ ၈ ရာစုတွင်အိန္ဒိယသည်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရာ၌ဝိညာဏအသစ်ပြန်လည်သက်ဝင်လှုပ်ရှားလာသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။ ဘုရင်များသည်ဗြဟ္မာများအားသူတို့၏အခွင့်ထူးဟောင်းများကိုပြန်လည်ပေးခဲ့သည်။ ဇာတ်စနစ်သည်ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာပြီးဗြဟ္မဏဘာသာသည်အရေးကြီးသောအတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်းဖြစ်သောဗီဒန်တာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဝေဒန္တအတွေး၏ထင်ရှားသောကိုယ်စားလှယ်Shankarâchâryaသည်အမျိုးအစားခွဲခြားမှုမရှိသောဝါဒ (Advaita Vedanta) ကိုထောက်ခံအားပေးခဲ့ပြီးသူ၏ဆက်ခံသူများနှင့်အတူအိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းကျယ်ပြန့်သောဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများကွန်ယက်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ သူ၏လွှမ်းမိုးမှုသည်အလွန်ကြီးသည်။ ယောဂများစွာသည်သူ၏စံနမူနာနောက်လိုက်ရသည့်ရူပဗေဒသန့်ရှင်းသောဗဟုသုတ (Jnâna-yoga) နှင့်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံယူခဲ့သည်။ အချို့သောအခြား Vedantic အတွေးအခေါ်များသည်သူတို့၏ပုံစံများတွင်အစွန်းရောက်မှုနည်းပါးပြီး၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ပေါ်ထွက်လာပြီးလွတ်လပ်သောကျောင်းများသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောကျောင်းများကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ Madhwa မှ Dualist Vedanta၊ Vallabha ၏စင်ကြယ်သော Non- duality ၏လမ်း, Ramanuja ၏ "သမ Non- Dualism" ၏ Vedanta ။
CASHMERE SHIVAISM ကက်ရှမီးယား Shaivism သည်အေဒီ ၁၈ ရာစုတွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ Vedanta နှင့်မတူသည်မှာ၎င်းသည် Vedas နှင့် Upanishads တို့၏အခွင့်အာဏာကိုသာမှီခိုအားထားခြင်းမရှိသော်လည်း Tantras နှင့် Shaivist Agamas တို့တွင်၎င်း၏လှုံ့ဆော်မှုကိုတွေ့ရသည်။ ယခုတိုင်နှုတ်ဖြင့်ကူးစက်သောဤရှေးဟောင်းကျမ်းများပြန်လည်ရှင်သန်လာမှုသည်အလေ့အကျင့်အသစ်နှင့်ယောဂသိပ္ပံတစ်ခုလုံးကိုပိုမိုသိကျွမ်းခြင်းတို့ဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။ ဒီအတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာလတ်တလောတွင်အဓိကလမ်းကြောင်းများစွာရှိသော်လည်းအထင်ရှားဆုံးမှာဆယ်စုနှစ်ရာစုကျော်ကြားခဲ့သော Abhinavagupta ဖြစ်သည်။
အလယ်ခေတ်အိန္ဒိယ ဖြေ။ ။ ဒီအသီးအပွင့်များတဲ့ဒီအိန္ဒိယအလယ်ခေတ်တလျှောက်မှာအခြားလှုပ်ရှားမှုတွေကတစ်ပြိုင်နက်တည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ ၁၂ ရာစုတွင်ဟတ်ဟိုး - ယောဂသင်ကြားခြင်းနှင့်လျှို့ဝှက်သည့်နည်းစနစ်များနှင့်လျှို့ဝှက်နည်းစနစ်များကိုလေ့လာသင်ယူခဲ့ကြသောနာသာ - ယောဂများနှင့်ဗြဟ္မဏအလွန်အမင်းကန့်သတ်ချက်တွင်တည်ရှိသောလင်ဂါယတ်စ်တို့၏အဖြစ်အပျက်ကိုကိုးကားကြပါစို့။ သြသဒေါက်။ သို့သော်အခြားအဓိကအချက်တစ်ခုမှာအိန္ဒိယ၏အတွေးအခေါ်နှင့်ဘာသာရေးအတွေးအမြင်အားလုံးကိုအရောင်နှင့်ပြုပြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ Bhakti (သို့မဟုတ် Love-Faith) သည် Vedas ဓမ္မသီချင်းအချို့တွင်တိတ်ဆိတ်စွာရှိနေပြီး Tantras နှင့် Agamas ၏Shivaïstသဘောတရားနှင့်မကိုက်ညီသော်လည်း Vishnouist ၏လက်ရှိနှင့်၎င်း၏ Avatars (ဘုရားသခင့်လူ့ဇာတိများ) နှင့်လုံးဝမတူသည်။ ဘာသာရေးဆိုင်ရာဝတ်ပြုရေးကိုရိုးရှင်းသောစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်အတွေ့အကြုံအရ Bhakti သည်ယောဂများ၏နှလုံးကိုထိုးနှက်။ ဘုရားထံသို့ရောက်ရှိရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
မူဆလင်အိန္ဒိယ - အေဒီ ၇ ရာစုမှ စ၍ အာရပ်ကုန်သည်များသည်အိန္ဒိယသို့အခြေချလာကြသည်။ သူတို့နောက်မှ ၁၂ ရာစုအကုန်အထိပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည့်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏နောက်တွင်လိုက်ကြသည်။ ပထမအကြိမ်ဒေလီ (Sultanate) (၁၂၀၆-၁၅၂၅) သည်ချောချောမွေ့မွေ့သွားခြင်းမရှိဘဲပashesိပက္ခပေါင်းများစွာသည်လူစုနှစ်စုနှင့်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး မုန်းတီးစေခဲ့သည်။ များစွာသောအတင်းအဓမ္မဘာသာပြန်ခြင်း၊ အထူးသဖြင့်တိုင်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိလူမှုရေးနှင့်ဘာသာရေးအခြေအနေကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။
မွန်ဂိုအင်ပါယာ မွန်ဂိုအင်ပါယာပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက်အထူးသဖြင့်perကရာဇ်အက်ဘာ (၁၅၅၆-၁၆၀၅) လက်အောက်တွင်လူမှုရေးနှင့်ဘာသာရေးအခြေအနေများသည်ပိုမိုသည်းခံလာပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံသည်အနုပညာနှင့်ဗိသုကာနယ်ပယ်တွင်ကြွယ်ဝသောသန့်စင်ပြီးသောယဉ်ကျေးမှုတိုးတက်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။ ။ မွတ်စ်လင်မ်ဘာသာရေးယုံကြည်မှုများသည်အသိုင်းအဝိုင်းနှစ်ခုအားပိုမိုနီးကပ်စွာအတူတကွပေါင်းစည်းရန်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ played မှပါဝင်ခဲ့ပြီးဆူဖီများနှင့်ယောဂီများအကြားအပြန်အလှန်လဲလှယ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်းဟိန္ဒူဘာသာသည်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေတက်ကြွစွာရှိနေခဲ့ပြီး Caitanya (1556-1605), Vallabha (1486-1533) နှင့်Mirabaï (1479-1531) ၏လူများ၌ပြင်းထန်သော၊
ဆစ်ခ် - ဆစ်ခ်ဘာသာတရားသည်ပန်ဂျပ်ဒေသတွင်ပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီး၊ Guru Nanak (၁၄၆၉-၁၅၃၉) မှသည်သူ၏ဘ ၀ အတွင်းဘာသာတရားအားလုံး၏လွန်ကဲသောစည်းလုံးမှု၊ သူ၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုင်ရာသတင်းစကားကဟိန္ဒူနှင့်မွတ်စလင်အမြောက်အများကိုအတူတကွလွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခွင့်နှင့်ကောင်းမွန်စွာနားလည်သဘောပေါက်ရန်လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်မွန်ဂိုအာဏာပိုင်များ၏ဖိအားပေးမှုကြောင့်ဆစ်ခ်ျသည်ကိုယ်ပိုင်ဘာသာရေးထုံးတမ်းများနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားပြီးဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသောဘာသာဖြစ်လာသည်။ အစ္စလာမ်နှင့်ဟိန္ဒူဘာသာ ၀ င်များ၏လွှမ်းမိုးမှုနှစ်ဆလွှမ်းမိုးသောကဗျာဆရာကဗျာ၏ထူးခြားထင်ရှားသောပုံနမူနာကိုကိုးကားကြပါစို့။ သူသည်ကဗျာများကိုမွတ်စလင်များနှင့်ဟိန္ဒူတို့အားကြီးကျယ်သောပညာရှိတစ် ဦး ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်သီဆိုခဲ့သည်။
ဗြိတိသျှကိုလိုနီ အိန္ဒိယသည်မြေထဲပင်လယ်ကမ္ဘာနှင့်အမြဲတမ်းအပြန်အလှန်ဖလှယ်ခဲ့သည်။ ဂရိ၊ ရောမ၊ အာရပ်များသည်မွှေးနှင့်ပိုးထည်ကုန်သွယ်မှုကိုထိန်းချုပ်ရာတွင်အလှည့်အပြောင်းပြုကြသည်။ ပေါ်တူဂီသည်အိန္ဒိယအနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတွင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းများဖွင့်လှစ်သောပထမဆုံးအနောက်တိုင်းသားများဖြစ်သည်။ သူတို့ကမကြာမီဒတ်ခ်ျ, ပြင်သစ်နှင့်အင်္ဂလိပ်တို့ကနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ထိုကဲ့သို့သောစျေးကွက်၏အစုရှယ်ယာများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါထိုအင်အားကြီး ၄ ခုအကြားခက်ခဲသောတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ၁၈ ရာစုအကုန်တွင်မွန်ဂိုအင်ပါယာမှသိမ်းယူခဲ့သောအိန္ဒိယပြည်နယ်များအားလုံးပြိုလဲခဲ့ပြီးအင်္ဂလန်သာလျှင်အင်အားကြီးမားပြီးအခြေအနေကိုသူ့အားအမြတ်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ၁၈၇၆ တွင်ဗြိတိသျှအုပ်စိုးမှုသည်အိန္ဒိယနယ်မြေတစ်ခုလုံးသို့တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး ၁၉၄၇ ခုနှစ်အထိအိန္ဒိယကိုပိုင်းခြားခဲ့သည်။
လှုပ်ရှားမှုများကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဖြေ - ဒီကာလဟာဟိန္ဒူဘာသာ ၀ င်တွေထဲမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုးကြောင့်ပါဘဲ။ ရာဟမ်ဟွမ်သည် ၁၈၂၃ ခုနှစ်တွင်Brahhasamâjအမည်ဖြင့်လူသိများသော“ တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်းဖြစ်သောဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း” ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးဟိန္ဒူ၊ မွတ်စလင်နှင့်ခရစ်ယာန်များကိုပထမဆုံးအကြိမ်စုရုံးခဲ့သည်။ သူ၏စံနမူနာကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့်ရှေးရိုးစွဲဟိန္ဒူဘာသာဝင်များဖြစ်သည့် Keshud Chander Sen (1823-1838) နှင့်Dayânanda Sarasvati (1884-1824) တို့မှအခြားပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားများကလိုက်နာခဲ့သည်။
အောင်မြင်သောအကြီးအ SAGES ဒါပေမယ့် ၁၉ ရာစုနဲ့ ၂၀ ရာစုအတွင်းမှာအိန္ဒိယကသိတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ပညာရှိတွေကသူတို့ရဲ့သွန်သင်ချက်တွေကိုဒီနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ကိုကျော်လွန်ပြီးဘယ်သူတွေဖြန့်ဖြူးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိပြီးအနောက်တိုင်းဆီယောဂကိုသိစေခဲ့တယ်။ Ramakrishna (၁၈၃၄-၁၈၈၆) သည်ကမ္ဘာအနှံ့လွှမ်းမိုးမှုရှိသည့်ပထမဆုံးသောခေတ်သစ်သူတော်စင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ သူသည်ဘာသာတရားအားလုံး၏လွန်ကဲသောစည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကြေငြာခဲ့ပြီးသူ၏အဓိကတပည့်ဖြစ်သူ Swami Vivekananda တွင်သူသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဆိုင်သောသတင်းစကားကိုပြန့်ပွားစေခဲ့သည်။ ငယ်စဉ်ကအနောက်တိုင်းပညာရေးရရှိခဲ့သည့်Shrî Aurobindo (၁၈၇၂-၁၉၅၀) သည်ယောဂအဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက်အရေးကြီးသောအလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့ပြီး Bhavagad-Gîtâမှဝေဖန်ချက်များပါသောဘာသာပြန်ကျမ်းအပါအ ၀ င်စာများစွာကိုရေးသားခဲ့သည်။ ခေတ်သစ်အိန္ဒိယ၏အရှိဆုံး "ချွတ်" သောပညာရှိ Ramana Maharshi (၁၈၇၉-၁၉၅၀) က“ ငါဘယ်သူလဲ” ဟူသည့်မေးခွန်းအားလုံးနှင့်အတူဗဟုသုတ၏လမ်းကြောင်းကိုသင်ကြားပေးခဲ့သည်။ Swami Ramdas (၁၈၈၄-၁၉၆၃) သည် Bhakti ၏အားတက်သရောရှိသောလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်သွားပြီးသူ၏စာအုပ်“ ဘုရားဖူးဒိုင်ယာလော့များ” မှတစ်ဆင့်မိမိကိုယ်ကိုထင်ရှားစေခဲ့သည်။ Manda Ananda Moyî (၁၈၉၆-၁၉၈၂) သည်မွေးဖွားစဉ်ကပင်ထူးကဲသောစံနမူနာရှင်ဖြစ်ခဲ့သည့် Benares ၏ Saint Saint ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်အတွင်းအခြားကြီးမားသောပညာရှိများကသူတို့ကိုယ်သူတို့အနောက်ကိုလူသိများလာခဲ့ကြသည်။ အင်္ဂလိပ်စာနှင့်ပြင်သစ်ဘာသာတို့ကိုတစ်ပြိုင်နက်ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း၊ အိန္ဒိယနှင့်အခြားကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအကြားနေ့စဉ်လေကြောင်းဆက်သွယ်မှုများကြောင့်သူတို့၏သင်ကြားမှုများကိုရရှိရန်များစွာအထောက်အကူပြုခဲ့သည်။
ယနေ့အိန္ဒိယ၏ Legacy ဖြေ - လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကတည်းကချမ်းသာခဲ့တဲ့အိန္ဒိယဟာကမ္ဘာပေါ်မှာဆန့်ကျင်ဘက်အရှိဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သူများအတွက်ငရဲ၊ အခြားသူများအတွက်ပရဒိသု၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးစိတ်ထဲဖြစ်သော Epinal ၏ပုံရိပ်များမှထွက်ခွာရန်မလွယ်ကူပါ - လူ ဦး ရေအလွန်နည်းပါးခြင်း၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်း၊ အစာခေါင်းပါးခြင်း၊ ရဲတိုက်များ၊ မြင့်မားသောနွားမများ၊ ဘုရားကျောင်းများ၊ မဟာရပ်များ၊ , အတောမသတ်အပေါ် superimposed ထားတဲ့အများအပြားclichéအဖြစ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အိန္ဒိယနိုင်ငံသည်ဤအရာအားလုံးကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ပြုလုပ်သောကြောင့်လူ့ယဉ်ကျေးမှု၏အဓိကပုခက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမတူကွဲပြားသောလူမျိုးစုများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများ၏သက်ရှိသတ္တဝါများ၊ ဘာသာရေးနှင့်မြင့်မြတ်သောနက်ရှိုင်းသောခံစားချက်အပြင်စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုလည်းဖြစ်သည်။ လူမျိုးရေးပြissuesနာများ။
တစ် ဦး က Fabulous ဘဏ္Tာ လူ ဦး ရေတစ်ဘီလီယံကျော်ဖြင့်အိန္ဒိယသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံသည်၎င်း၏အတိတ်ကာလ မှနေ၍ ကျွန်ုပ်တို့အားအလွန့်အလွန်ကောင်းသောရတနာ၊ အတွေ့အကြုံ၊ အသိပညာနှင့်ချစ်ခြင်းများစွာကိုပေးသည်။ ဤအံ့ဖွယ်ဘဏ္asureာသည်ယောဂထက်သာသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်၏ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု၊ စိတ်ဝိညာဉ်၏မြင့်မြတ်ခြင်း၊ စိတ်နှလုံးသန့်ရှင်းခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုပေးဆက်ခြင်း၊
ယောဂစွယ်စုံကျမ်း။ Hatha Yoga, အပေါငျးတို့သ asanas ခြေလှမ်း (WELLNESS)
နောက်ဆုံးဇူလိုင်လ 31, 2021 5:40 pm တွင် updated
Ani ၏ Papyrus နှင့်နောက်ဆုံးတရားစီရင်ခြင်းကိုအကြားတူညီ
အဆိုပါအကူအညီ (2011) အကဲခတ်
Mooji ၏သွန်သင်ချက် (ဗွီဒီယိုများ)